Mmelite: Melite CMS ọ bụla, Ecommerce Platform ma ọ bụ Weebụ Weebụsaịtị | Martech Zone
Broshọ na saịtị ecommerce na-arụ ọrụ yana ọdịnaya nke oge a dị mkpa karịa mgbe ọ bụla. Ikike iji melite saịtị gị ejedebeghị na mgbanwe ọdịnaya, ọ bụkwa ịga n'ihu na-eme ka ibe akwụkwọ kachasị mma maka ọchụchọ, mkpanaka, na ntụgharị. N'oge a, ọ bụ ihe ịtụnanya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị ahịa ga-akpọtụrụ ngalaba IT ha iji mee mgbanwe dị mkpa na weebụsaịtị ha kwa izu - mana ọ bụ eziokwu.
Ayima kwupụtara ntọhapụ nke Ebugharị, ngwaahịa SaaS ọhụrụ dabere na teknụzụ nnọchianya nnọchi anya nke na-enyere ndị ọrụ aka ịgbanwe mgbanwe na weebụsaịtị ha ozugbo, na-enweghị mkpa ngwụcha ma ọ bụ njikwa njikwa ọdịnaya.
Ma weebụsaịtị dabere na usoro njikwa ọdịnaya nke ụlọ ọrụ, usoro e-commerce ma ọ bụ usoro ịde blọgụ, Updatable na-enye ngwọta dabeere na ihe nchọgharị nke na-eme ka usoro dị mgbagwoju anya dị mfe, na-enyere ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na ndị ahịa aka ime mgbanwe na oge, na n'ikpeazụ ịchekwa oge na akwụ ụgwọ na arịrịọ mmepe.
Nlekọta vidiyo emelitere
Site na nchịkọta WYSIWYG kensinammuo (Ihe See Na-ahụ Bụ Ihe Get Nweta), editọ, enwere ike iji Updatable maka ọrụ ndị a na ndị ọzọ:
Tweaking dị content na ibe weebụ
Ibugharị URL / Renaming Peeji
Mmejuputa na-na peeji nke SEO ndokwa
Na-egbu egbu HTML koodu gbanwere
Mepụta ika ọhụrụ peeji nke jiri ndebiri ndebiri di na websaịtị
Ebugharị na-enye ohere ụlọ ọrụ ịkpọ òkù ka ọtụtụ ndị ọrụ dị ka mkpa na mbara ikike.
Na Ayima, anyi enyela ndi ahia anyi ihe omuma ahia dijitalụ, mana anyị ahụkwala ụdị nsogbu ahụ ugboro ugboro; ìgwè ndị na-enweghị ike idozi usoro ihe na-enweghị enyemaka onye nrụpụta weebụ, ndị otu akwụ ụgwọ Media na-enweghị ike ị nweta peeji ọdịda ha ngwa ngwa, yana ndị mmepe web web rapaara na-eme obere mmelite na weebụsaịtị, na-egbochi ha arụ ọrụ kwụ n'ahịrị mgbe ha nwere ike na-arụ ọrụ na n'ihu ọhụrụ maka saịtị. Anyị chọrọ idozi nke a, yana na Updatable, ndị mmepe nwere ike ịlaghachi na-eme ihe ha hụrụ n'anya, ebe ndị na-enweghị ahụmịhe mmepe weebụ nwere ike ịme mgbanwe mgbanwe na SEO mmezi na efegharị. Rob Kerry, Chief Strategy Officer na Mmelite.
Atụmatụ ọnụahịa maka Ebugharị bido na $ 99 kwa ọnwa.
Tags: Ayimacms mmeliteọdịnaya managementna-atụgharịlaa azusaasemelitere